'Halloween' ကြယ်ပွင့်ဂျေမီ Lee Curtis ကို Haddonfield သို့ပြန်ဆွဲဆောင်သော The Deal
ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း 'Halloween' ကြယ်ပွင့်ဂျေမီ Lee Curtis ကို Haddonfield သို့ပြန်ဆွဲဆောင်သော The Deal
by David Grove အောက်တိုဘာလ 6, 2017
ကရေးသား David Grove အောက်တိုဘာလ 6, 2017
ဂျေမီ Lee က Curtis ဟောလိဝုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်အရလာမည့်အပေါ်သူမ၏လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အနည်းငယ်သာပေးဆပ်နေရသည် ဟယ်လို ရုပ်ရှင်။ သို့သော် အကယ်၍ ရုပ်ရှင်သည် Box Office အောင်မြင်မှုရရှိပါက Curtis သည်သန်းပေါင်းများစွာဝင်ငွေရရန်ရပ်တည်နေသည်။
Curtis သည်လာမည့်အလုပ်များအတွက်ကျိုးနွံသောလစာငွေရရှိသည် ဟယ်လို အမြတ်အစွန်းတစ်ဖဲ့လဲလှယ်အတွက်ရုပ်ရှင်။ ၎င်းသည်အမြတ်အစွန်းပါ ၀ င်မှုသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပြီး Blumhouse ထုတ်လုပ်သည့်ရုပ်ရှင်၏ကြယ်ပွင့် Ethan Hawke နှင့်အတူ Halloween ရုပ်ရှင်အသစ်နောက်ကွယ်မှကုမ္ပဏီ Blumhouse Productions နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည် ထုတ်ပယ်သန့်စင် နှင့် ဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့။ ယခုအချိန်အထိဟော့ကင်းမှဒေါ်လာ ၁၀ သန်းခန့်ရရှိခဲ့သည် ထုတ်ပယ်သန့်စင် နှင့် ဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၈ သန်းနှင့် ၆၄ မီလျံစုစုပေါင်းဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားသည်ပြည်တွင်း Box Office တွင်ရရှိခဲ့သည်။ Vera Farmiga နှင့် Patrick Wilson တို့သည် Blumhouse မဟုတ်သောထုတ်လုပ်မှုမှကြယ်များဖြစ်သည် Conjuring ဒီရုပ်ရှင်ကဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာရရှိခဲ့တယ်။
လာမည့်လျှင် ဟယ်လို ရုပ်ရှင်၏ box Office ရဲစွမ်းဆောင်ရည်သည်ဆင်တူသည် အဆိုပါ သုတ်သင်ရှင်းလင်း နှင့် ဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့ ပြည်တွင်း Box Office တွင် Curtis သည်ဒေါ်လာ ၅ သန်းခန့်ဝင်ငွေရရှိလိမ့်မည်။ သို့သော် အကယ်၍ ရုပ်ရှင်သည်ဤပုံစံထက်သာလွန်ပါကအရေအတွက်သည်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းအထိပိုမိုနီးကပ်လာနိုင်သည်။ “ Ethan Hawke ဟာကြယ်တစ်ပွင့်လို့ယုံကြည်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ box Office ရဲ့သရုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ထုတ်ပယ်သန့်စင် နှင့် ဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့သူတို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်” ဟုနီးစပ်သူတစ် ဦး ကပြောသည် ဟယ်လို ထုတ်လုပ်မှု။ “ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင်များသည်ကြယ်များဖြင့်မောင်းနှင်သည့်ရုပ်ရှင်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ မှတ်မိလွယ်သောမျက်နှာရှိရန်နှင့်လူတို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုရရှိရန်ကူညီသည်။ ဟယ်လိုနှင့်စီးရီး၏သမိုင်း, သူတို့ကဂျေမီစဉ်းစားပါ။ သူမသည်ရုပ်ရှင်အသစ်အတွက်အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သည်။ သူသည်စီးရီးအတွက်ငွေများစွာထိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤသဘောတူညီမှုသည်ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ဘတ်ဂျက်ကိုဒေါ်လာ ၁၀ မီလျံအောက်တွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အောင်မြင်မှုအတွက်ဆုဖြစ်သည်။ ထိုဇာတ်ကားများသည် Jamie ကဲ့သို့သောကြယ်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာအမျိုးအစားတွင်ဂျေမီသည်စူပါစတားကြီးဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။
Curtis ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကဲ့သို့အခြားမင်းသမီးများစွာကဲ့သို့လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းသိသိသာသာနှေးကွေးခဲ့သည်။ သူမ၏နောက်ဆုံးအဓိကတိုက်ခိုက်မှုမှာ ၂၀၀၃ ခုနှစ် Freaky သောကြာနေ့အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့သည့်ယင်းဇာတ်ကားသည် Box Office ၏ထိပ်ဆုံးနေရာတွင်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ သူမရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် ၁၉၈၀ နှောင်းပိုင်းနှင့် ၁၉၉၀ နှစ်လယ်ကာလများအတွင်း Curtis ၏စျေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၂ သန်းမှ ၃ သန်းကြားဖြစ်သဖြင့်စီမံကိန်းအသစ်သည် ဟယ်လို ရုပ်ရှင်သည်သူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အကြီးဆုံးလစာပေးသည့်နေ့ဖြစ်သည်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်လပြီးနောက်, နိုဝင်ဘာလ 60, 22 ရက်တွင် 2018 လှည့်သူကို Curtis ဟယ်လို ရုပ်ရှင်၏စီစဉ်ထားသည့်ပြဇာတ်ရုံသည် ၁၉၇၈ တွင်ဒေါ်လာ ၈၀၀၀ သာရရှိခဲ့သည် ဟယ်လို ရုပ်ရှင်။ သူမသည် 100,000 ခုနှစ်များအတွက် $ 1981 ပေးဆောင်ခဲ့သည် ဟယ်လို II ကို၁၉၇၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၁ ခုနှစ်အတွင်း Curtis ၏အော်ဟစ်ဘုရင်မကာလအတွင်းရရှိခဲ့သည့်အမြင့်ဆုံးလစာဖြစ်သည်။ ဟယ်လို: H20, Curtis ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $5သန်းရရှိခဲ့သည်။ Curtis ကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာသူမရဲ့တိုးချဲ့ထားသောဂါဇီအတွက်ဒေါ်လာ ၃ သန်းပေးခဲ့သည် ဟယ်လို: ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း.
Curtis နှင့်သူမ၏အော်ဟစ်သောမိဖုရားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ပိုမိုသိရှိလိုပါကစာအုပ်ကိုဖတ်ပါ ဂျေမီလီ Curtis: ဘုရင်မအော်ဟစ်, အရာအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် paperback နှင့်တဆင့် ညှိရ.
အိမ်မက်ဟယ်လိုကွောကျလနျ့ခွငျးဂျေမီ Lee က Curtisလော်ရီ Strodeဇာတ်ကားမိဖုရားစီးရီး
အငြင်းပွားဖွယ်ရာများအနက်အောက်တိုဘာလတွင် Jeepers Creepers3သည် SyFy ကိုလွှင့်ထုတ်မည်
Spawn Reboot သည်နောက်နှစ်အစောပိုင်းတွင်စတင်ရိုက်ကူးပါမည်။